पेलेको नजरमा रोनाल्डो भन्दा मेस्सी उत्कृष्ट ! - Bigul News
पेलेको नजरमा रोनाल्डो भन्दा मेस्सी उत्कृष्ट !
चैत १२, २०७६ ST
प्रकाशित : बुधबार, चैत १२, २०७६१६:५१
फोटो सुटका कारण रोनाल्डोको चर्को आलोचना !
७ घण्टा अगाडि BNCOM
८ घण्टा अगाडि BNCOM
७ तस्विरमा हेर्नुहोस अभिनेत्री ईशा गुप्ताको खुलेको जवानी, धेरैको खिच्छ ध्यान!
१० घण्टा अगाडि RT
फेसनको मामलामा सबैलाई पछि पार्छिन् सोनम, नपत्याए हेर्नुहोस् यी तस्विर !
४ दिन अगाडि RT
बलिउडमा आउनुभन्दा पहिले ट्याक्सी चालक देखि वेटर सम्मको काम गर्दथे यी एक्टर्स